नेकपाका दुवै पक्षले मानिसलाई भाडामा ल्याएर प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रको खिल्लाप हो : रामहरी खतिवडा - Ankuran Khabar
माओवादीमै रहेको दाबी गरेका ‘एमाले नेता’को रिटमाथि आज सुुनुवाइ हुँदै... २०७८ श्रावण १४
नेकपाका दुवै पक्षले मानिसलाई भाडामा ल्याएर प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रको खिल्लाप हो : रामहरी खतिवडा
२०७७ फाल्गुन ३0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशको राजनीति तिव्रगतिमा ध्रुबिकरण भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरी बैशाक १७ र २७ गते नयाँ चुनावको घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ । संसद विघटनको कानूनी उपचारबाट हल गर्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा पक्षविपक्षबीच बहस पैरवी भइरहेको छ । प्रम ओलीको कदम असंवैधानिक र लोकतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र भएको भन्दै ओली निकटको नेकपा बाहेकका सबै अहिले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रम ओलीको कदम संविधान विपरित भनेपनि निर्वाचनको विकल्पलाई उसले खुल्ला राखेको छ । नेताहरुको मनोमानी र लहडका कारण मुलुक फेरी अँध्यारो राजनीतिमा फस्ने हो कि भन्नेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता जायर गरेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, कांग्रेसको आगामी भूमिका, केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी लगायत विषयमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व सांसद् रामहरी खतिवडासंग अंकुरण खबरको टिमले गरेको कुराकानीको संपादित अंश…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग भएको कारण देखाउँदै संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रमको कदमलाई लिएर कतिपयले व्यवस्थानै धरापमा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता जायर गरेका छन् । यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयोको छ । उहाँले पदमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । उहाँलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन । उहाँले आफुसँग बहुमत रहेको परीक्षण संसदभित्रै गर्नुपथ्र्यो उहाँले त्यसो गर्नुभएन र चुनावमा जानुभयो । यसो भन्दैमा कांग्रेस चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन । जस्तोसुकै समस्याको समाधान पनि चुनावबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यसबारे अदालतमा व्यापकरुपमा पक्ष-विपक्षबीच बहस चलिरहेको छ । कसैले पनि सडकमा ठुलो जुलुस निकालेर वा भाषण गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्न हुदैन । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सडकबाट संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न पुष्पकमल दाहाललाई छ, न त केपी वा शेरबहादुर देउवालाई रहेको छ । त्यसैले अदालतको निर्णय हामी मान्छौं ।
संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले जुन रुपमा स्पष्ट धारण बनानु पर्ने हो,त्यसो नगरी ढुलमुले नीति लिएको आरोप छ नि ?
यो आरोप बिल्कुल झुट आरोप हो । प्रम ओलीको कदम असंवैधानीक भएको भन्दै संस्थागतरुपमा नै सबैभन्दा पहिला विरोध जनाउने पार्टी कांग्रेस हो । भ्रमबाट मुक्त हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानीक कदमको हामीले केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौं । हो, नेकपाको जस्तो मानिसलाई भाडामा ल्याएर कांग्रेसले चिकेन, मटम आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दैन । भाडामा जुलुस लिएर सिंहदरबार, बानेश्वरमा कसैले पिज्जाको आन्दोलन गरे, कसैले केएफसीको आन्दोलन गरे । हामीले त्यो मात्र नगरेको हो । हामी जनताको घरघरमा पुगेका छौं ।
तपाईंले नेपाली कांग्रेस देशभर विरोध कार्यक्रम लिएर गएको दावी गरिरहदा, नेपालको इतिहासमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा बी.पी, गणेशमान, किसुन जी, गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा ठुलठुला आन्दोलन भएका थिए तर अहिले तपाईहरुको सशक्त विरोध देखिएन यसलाई कसरी बुझ्ने ?
हो, तपाईंले भने जस्तै नेपालको इतिहासमा ००७ सालदेखि सबै आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बाहेक यस मुलुकलाई कम्युनिष्टले नेतृत्व दिन सक्दैन । हामी लोकतन्त्र र कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट कसैलेपनि दवाव दिन मिल्दैन । यसको मतलब कांग्रेसले केही नै गरेन भन्न मिल्दैन । जनताले दुई तिहाइ दिदा पनि काम गर्न नसकेर सत्तारुढ दल नेकपा सडकमा कुर्लिरहेका छन् । न त यिनीहरुले राम्रोसंग सत्ता चलाउन सके न त प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सके । बाहिर बस्दा पनि मान्छे मारेर धुनचक्र मच्चाउछन् । अब यिनिहरुलाई कसरी तह लगाउने भन्ने कुरामा कांग्रेसले विचार पुरयाउनु पर्छ ।
तपाईकै पार्टीको कुरा गर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सडकबाट नभइ चुनावबाट समस्याको हल खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् तर अर्का बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सडक संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यो त दोहोरो चरित्र भएन र ?
नेपाली काँग्रेसको अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा हो । उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । अन्य नेताले के भन्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा होइन । तपाईहरुको बुझाइमा फरक पर्न गएको मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र गैह्र लोकतान्त्रिक छ । उहाँले अनाधिकृतरुपले अख्तियार दुरुपयोग गर्नुभएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस कुनै दुविधामा छैन । कुनै व्यक्ति विशेष नेताले व्यक्त गरेको विचारलाई लिएर कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखायो भन्न मिल्दैन ।
तपाईले कानुनी राज्य र अदालतको निर्णयनै सर्वोपरी ठान्ने रटान लगाइरहदा केही समय अघि आइजिपी प्रकरणमा आफुले भनेको जस्तो नभएकोमा बहालवाल प्रधानन्यायधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने अनि अहिले संसद विघटनको मुद्धामा चै अदलतमा विचाराधीन मुद्दा भनेर कांग्रेस पन्छिन पाउँछ ?
हैन, हैन, हामी जनताको अधिकार खोस्ने राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने पार्टीका कार्यकर्ता हौं । यदि संविधानमाथि आँच आउने काम अदालतले ग¥यो वा अपव्याख्या भयो, कानूनी राज्यको परिपालना भएन भने प्रधानन्यायशीलाई समेत महाअभियोग लगाउने तागत कांग्रेससंग छ । अदालतले संविधान र जनताको पक्षमा फैसला गर्छ भनेर विश्वास गरेको छ । यदि त्यसो भएन भने हामी जुनसुकै विकल्पमा पनि जान्छौं । तर, निर्णय गर्न त दिनुप¥यो नि ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नसच्याइ चुनावमा जाँदा भोली तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि समस्या आउला नि ? यस्तो अवस्थामा कसरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व सम्भव देख्नुहुन्छ ?
हामीले प्रधानमन्त्रीको कदम कहाँ नसच्याउने भनेको छौं र ? प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघट गरे रामचन्द्र, शेरबहादुर, माधब, पुष्पकमल दाहालले सच्याउने त होइन नि । सच्याउने नसच्याउने त अदालतको कुरा हो । त्यसैले हामी अदालतप्रति विश्वास गरेको हो । यदि अदालतले सच्यायो भने कम्युनिष्टले फेरी सरकार बनाउन सक्दैन । तीन वर्षमा काम गर्न नसक्नेले अब केही गर्न सक्दैनन् । अबको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ । त्यसपछि पनि जाने चुनावमै हो ।
अब कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ त ?
कांग्रेसको अबको भूमिका जनादेशको कदर गर्दै जनभावनाअनुसार अगाडी बढ्छ । कांग्रेस जस्तो स्पष्ट नीति लिने अरु पार्टी नै छैन । अहिलेको नीति कानूनी राज्यको पालना गरेको मात्र हो । हिजोका दिनमा कम्युनिष्टले कानूको पालना गरेनन् । उसलाई कानूनको पालना गर्न भूभिका खेल्यो । हिडिरहेको शिक्षकलाई रुखमा झुण्डयाएर मारे । बाटोमा हिडिरहेका विद्यार्थीलाई बम पड्काएर मारे । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम हामीले गरेका हौं । त्यसैले कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ भनेका हौं ।
कत्तिपयले प्रधानमन्त्रीले अब प्रदेश सरकार विघटन गर्ने र परिस्थिति आफनो पक्षमा नभए संकटकाल समेत लगाउन सक्छन् भनिरहेका छ नि यसमा कांग्रेसले के गर्छ ?
त्यस्तो हुँदै हुदैन । प्रधानमन्त्रीले कहाँ जे पायो त्यही गर्न पाउँछ ? विघटन गर्न कानूनले दिदै दिदैन नि । कि दिमाग बिग्रेको हुनु प¥यो । त्यस्तो हुन हामी दिदैनौं ।
आफुलाई पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी दावी गर्ने कांग्रेसले यहि फागुन ७ गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरेपनि त्यो संभव भएन् । पाँच वर्ष वितिसक्दा समेत महाधिवेशन गराउन नसक्दा यसले कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुँदैन ?
विश्वव्यापी कोरनाको कारण हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको मितिको औचित्य समाप्त भइसकेकोले अहिलेलाई महाधिवेशन हुदैन । यदि बैशाखमा चुनाव भयो भने भदौमा महाधिवेशन हुन्छ । चुनाव भएन भने जेठमा चुनाव हुन्छ ।
पाँच वर्ष त अधिकारै हो नि । नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन । वर्षै पिच्छे अधिवेशन गर्ने कुरा हो र । किसुन जीको पालामा पनि पाँचै वर्षमा भएको हो । गिरिजा बाबुको पालामा पनि त्यहि भएको हो । सुशीलको पालामा पनि त्यहि भएको हो । अहिले कुन नौलो कुरा हो र । यसमा वैधानिकता अवैधानिकता भन्ने कुरै आउँदैन् ।
कांग्रेसभित्र अझै क्रियाशिल सदस्य वितरणमा विवाद छ । भातृ संगठनको अहिलेसम्म अधिवेशन गराउन सक्नु भएको छैन । पार्टी सभापति र बरिष्ठ नेता पौडेलबीच भागबण्डाको विवाद कायमै छ । यस्तो भद्रगोल अवस्थामा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न होला र ?
अब अधिवेशन गर्ने बेलामा विवाद गर्नुको कुनै तुक छैन । एक दुई दिनभित्र सबै जिल्लाबाट आइसक्छ क्रियाशिल सदस्यको विबरण आइसक्छ । दुई महिनामा केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ । अनि अर्को कुरा बाहिर हल्ला भएजस्तो कांग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन । चुनावको वर्ष हो । पार्टीभित्र केही कमजोरी हुनु स्वभाविक हो ।
सभापति देउवाले फेरी नेतृत्वमा आउन चुनावको दाउ रचिएको आरोप छ नि ?
त्यो कुन नौलो कुरा हो र । जो पार्टी सभापति हुन्छ । उसको पालामा चुनाव भयो भने उसले पावर क्याप्चर गर्नु स्वभाविक हो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा संधै पुराना पुस्ता हावी भइरहने नयाँ पुस्ताले कहिल्यै अवसर नपाउने गुनासो रहेको छ । अबको महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना कति छ ?
हेर्नोस, कांग्रेसभित्र धेरै पुराना मानिस पनि छन् । साथीहरु एकदम क्षमतावान पनि छन् । हामी सबैलाई मिलाएर हिड्छौं । कसैलाई अपमान गर्दैनौं । पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई ठाउँ दिएर अगाडी बढ्नु पर्छ । कांग्रेस बीपी, किसुनजी, गणेशमान जस्ता नेताले त्याग गरेको पार्टी हो । कहिलेकाहीं कमजोरी हुन्छन् । अब नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस बाहेक अरुले शासन गर्न सक्दैन । अब सबैलाई मिलाएर लिएर जान्छौं ।
यसको मतलब युवा पुस्ताले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व गर्न अझै नसक्ने अवस्था हो ?
बिल्कुल होइन । युवाले नेतृत्व लिन किन नसक्ने ? रामचन्द्र दाई र शेरबहादुर दाईको यो अन्तिम पटक हो । हामी सबै युवा हौं । हाम्रा नेतृत्व सधैं बाँचिरहने होइन । आर्यघाट जाँदा पदै लिएर जाने पनि होइन । अब हामी नै त हौं नि । उहाँले पनि युवाहरुलाई साथमा लिएर जानु पर्छ ।
अबको नेतृत्वमा हामीनै आउने हो । विचारले युवा हुनुप¥यो,उमेरले होइन । अमेरिकामा ७८ वर्षको उमेरमा चुनाव जितेर आइरहनु भएका छन् । रसियामा हेर्नुहोस । भारतमा देखिहाल्नुभएको छ । चीनमा त्यस्तै छ । देशमा भएका हरेक स्रोत र शक्तिलाई परिचालित गर्दै संवृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्ने खुबी भएको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा आउनु पर्छ । यसको लागि हामी पार्टी भित्र होस् या बाहिर संघर्ष गरिरहेका छौं ।
अदालतले विघटन सदर गर्न सक्छ, चुनावको तयारी गर्नुस् : कमल थापा
Breaking News माओवादीमै रहेको दाबी गरेका ‘एमाले नेता’को रिटमाथि आज सुुनुवाइ हुँदै